Ny zava-pisotro organik tsara indrindra | safidy
Buen Vivir - Zo amin'ny fiainana tsara
Andron'ny lanonana maintso maitso tany Etiopia: hazo 280.000 XNUMX namboly
Potika gratin misy tongolo maniry
Fitsarana ho an'i George Floyd! | Amnesty Austria
Ny fandraràna ny fanavakavahana dia ampahany lehibe amin'ny fenitry ny FAIRTRADE
#keingeldfuergestern - fa ho an'ny toekarena maitso sy maharitra | Greenpeace Germany
"Ahoana ny fomba hiondrehantsika ny curve?" Resaka an-tserasera NABU momba ny paikadin'ny biodiversity an'ny EU | Naturschutzbund Alemana
"Fony mbola zaza aho dia voasaron'ny ala matevina ny zava-drehetra ...
ny Helmut Melzer 29. Oktobra 2019, 12: 15 14.3k Views
Ny zava-pisotro organik tsy voatery homemade ho. Nandritra ny fotoana ela, ny mpanamboatra samihafa dia nihaona ny fitomboan'ny tinady Organic sakafo sy ny zava-pisotro misy zava-pisotro voajanahary no ekena ary mitondra fandaharana vaovao eny an-tsena. Ny zava-pisotro voajanahary dia misy akora voajanahary vita amin'ny biolojika ary manome antoka fa tsy ny injeniera genetika na ny zezika poizina na ny pesticides no ampiasaina amin'ny famokarana. Mamelombelona antsika amin'ny karazany maro samihafa ny zava-pisotro zava-pisotro. Na dite veromanitra, voasarimamy, kafe, divay na labiera, raha te hihinana am-pitoniana ianao dia tsy mila miala amin'ny zava-pisotro avy amin'ny sakafo voajanahary. Tandremo rehefa mividy zava-pisotro misy otrikaina Organic Labelizay manamarina ny fiaviana biolojika. ny Fitsapana ny zava-pisotro malefaka tsara indrindra misy ihany koa eto.
Ao amin'ny lisitray no ahitanao ny zava-pisotro organik tsara indrindra, nosedrain'ny mpamaky sy ny scout-ny vokatra. Iza ny zava-pisotro zava-pisotro tsy hita? Zarao aminay ny tianao!
#1 Greensheep dimy Mint Syrup
Ny karazana siramamy iraika ambin'ny folo dia misy amin'ny ondrilahy maitso. Izahay "dimy Mint" dia mafana sy mamelombelona! Ny akora rehetra dia avy amin'ny fambolena voajanahary organika - tsy misy preservatives na ny toy izany. Tsara koa mifangaro amin'ny mifangaro.
Eto am-piangonana ao amin'ny 7,90 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 21
#2 Voankazo masinina Pona
Ny zava-pisotro Australiana iray izay matsiro tsara, misy ny 60 isan-jaton'ny ranom-boankazo mivantana ary ny 40 isan-jaton'ny rano mamontsina (tsy misy hafa!). Ankoatr'izay dia mbola voajanahary ny Pona ary tsy misy siramamy fanampiny (fa fructose). Nanandrana karazana karazany hafa koa izahay ary nahita fa tena tsara ny rehetra.
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 17
#3 Ny fiainana an-koditra Biotic Voelkel
Zavamaniry Zisch Ginger Life avy amin'i Voelkel dia voasarimakirana manitra sy mamelombelona. Ny fofona dia manitra ary manandrana ny ginger henjana, tsy hoe mamy loatra ary manangom-bazaha tsy mahatsiaro tsara - tsy misy ny preservatives sy ny voankazo voajanahary. Raha tokony ho siramamy voatondraka mamy ao am-boaloboka.
Mety amin'ny andro fahavaratra!
#4 Izay rehetra mila ilako zava-pisotro maintso
Ny hany ilaiko dia misy ao anaty boaty na tavoahangy. Miorina ao Sencha, miaraka amin'ny acai, aronia, jasmine sy ginger, mamy manokana amin'ny agave, ny zava-pisotro dite maitso avy any Aotrisy amin'ny tsiro ary ireo nandresen'i Tom sy Alex dia nandresy lahatra antsika amin'ny fihetsiny. Ny akora dia vegan, organic ary fairtrade - ny faharetana dia laharam-pahamehana indrindra. Manana teboka 10 izahay!
Hita tao amin'ny Mercury ho an'ny 1,39 Euro
#5 Lemonaid voasarimakirana
Misotroa ary ampio!
Lemonaid Lime dia voasarimakirana mahafinaritra sy mamelombelona izay natao misy ranom-boankazo na varotra ara-drariny. Ny fangaro dia voajanahary ary voajinin'ny tantsaha kely voamarina. Miaraka amin'ny tavoahangy rehetra novidinao dia manohana tetikasa fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana isan-karazany ianao.
Ao amin'ny Denns 1,79 Euro (+ deposit)
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 19
#6 Voelkel BIO-C ranom-boasary makirana
Voatosika mivantana, organika ary Fairtrade!
Ao amin'ny famokarana ranom-boasary BIO-C dia miara-miasa amin'ny orinasam-pianakaviana any Ejipta i Voelkel ary miantoka amin'ny fifanarahana maharitra mandritra ny fotoana maharitra ho an'ny mpiasa mpamboly sy ny fiainana miaina tsara kokoa amin'ny fianakaviany - tena mahafinaritra!
Ho an'ny ums to 3,19 Euro (litatra 0,7)
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 24
#7 Ranom-boaloboka maintso Robin White
Ny tsirony tsara, malefaka, mamy, mifintina - atondron'ny ranom-boaloboka avy any Aotrisy Robin dia mamelombelona. Raha tsy mifantoka dia misy tsiro na siramamy fanampiny. Indrindra amin'ny fotoanan'ny fahavaratra mba hanoroan'ireo izay tia be dia be ny ranom-boaloboka. Ny robins dia hita ao anaty mena, ary koa - marika - toy ny cider misy alikaola.
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 30
#8 Pedacola, ny faritra cola rezionaly
Pedacola dia siram-boankazo mamelombelona, ​​cola isam-paritra, natao tamim-pitiavana ao amin'ny Mühlviertel.
Ny fototry an'io zava-pisotro mampientanentana io dia ny cola, antsoina koa hoe boar rhombus, izay novolavolain'ny tantsaha organik avy amin'ny Mühlviertel. Ho fanampin'izany dia misy siramamy, vaniliora, dibera, voasarimakirana, voasarimakirana ary ny sasany hafa, voajanahary voajanahary, akora miafina tsara kalitao mba hampangaro ny tsiro ny Pedacolas hamita.
• menaka voajanahary 100%
• tsy misy coffein
• tsy misy loko
• tsy mifantoka
• tsaramaso vanila
• fenoy sy asiana tànana
nampian'i Option 30. 2020, 11: 52
#9 Izay rehetra ilaiko dite fotsy
"Tsy zava-pisotro angovo hafa!"
... ihany koa ny fihetsinay voalohany rehefa nahita ilay vokatra vaovao teo amin'ny talantalana izahay. Fa ny zavatra ilaiko fotsiny dia tena namorona zava-baovao, tena matsiro amin'ny voankazo-boneka, zava-pisotro misy kafe fotsy mofomamy. Somary tart ary somary mangidy ny zava-pisotro. Ny mamy malefaka dia avy amin'ny paoma, ny fihavian'ny lotra sy ny turmeric manome tombony manokana. Tsy misy kafeinina voajanahary nampiana, varotra maharitra ary tsy miangatra.
Any amin'ny Mercury for 1,49 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 20
#10 Tea-ja-vu sun vavahadin-dite dite
Mamelombelona sy tena mampientam-po tokoa izahay, nahatsikaritra ity dite mafana ity, izay somary tsapa ho toy ny voasarimakirana ranom-boankazo mamelombelona. Ary avy any Aotrisy, Bio ary ny tavoahangy fitaratra aza dia vita amin'ny vera vita amin'ny vera. Tsy miampy siramamy intsony. Dite misy gilasy!
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 22
#11 Altenriederer Traisental apple strudel
Mazava ho azy mampalahelo izy!
Raha tianao ny strudel paoma, dia ho tianao ny ranom-paoma avy amin'i Altenriederer! Ny fofona sy ny tsiron'ny voasarimakirana, ny ginger ary ny vanila dia mampatsiahy ny mofomamy misy ny renibeny. Arotsaka feno masaka ny paoma an-toerana ka alefa vao haingana - ary toy izany koa ny tsirony - mampinono!
Azo alaina ao amin'ny Billa Klosterneuburg ho an'ny 2,99 Euro
#12 dite vera makava
Dite mahafatifaty, dite mangatsiaka aostraliana, izay mamelombelona mahafinaritra ary afaka manondro organika sy Fairtrade ihany koa. Ho an'ny mpikamban'ny mpitsara sasany dia tendron-tsiro misy boninkazo tsy misy dikany. Raha ny resaka ekolojia dia nahazo ny farafahakeliny fara tampony ny score voalohany nomena ny isa 8 ary noho izany dia mendrika ny fahazoan-kevitra fotsiny.
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 25
#13 Ny zava-pisotro 2B
Raha tianao ny misotro angovo sy / na zava-pisotro mahamora, dia afaka mamelombelona ny tenanao amin'ny 2B. Ny "misotro voankazo miasa" dia misy "superfoods" mafy toy ny L-arginine, jelly mpanjaka, clover mena, sns. Ary koa ny ranom-boankazo (avy amin'ny fifantohana) ary avy any Aotrisy. Ny angovo omena kafeinina (14,8mg) sy ny ginseng. Raha tsy izany, misy 2B milamina ihany.
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 27
#14 Alpenyod'l Bio angovo fisotro
Angovo avy amin'ny Alps
ALPENYOD'L dia zava-pisotro misy angovo voajanahary voamarina. Ny tsiro dia mampatsiahy an'i Almdudler, i Guarana no manome ny daka. Raha tsy misy taurine, loko, preservatives, inositol ary glucuronolactone dia fanavaozana avy any Switzerland, namidy tao Aotrisy.
Any amin'ny Mercury for 0,99 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 32
#15 Rabenhorst ranom-boaloboka am-boaloboka
Fahafinaritra amin'ny fampiharana
Ny ranom-boaloboka mamy sy masira Rabenhorst dia voajanahary ary voatsindry mivantana avy amin'ny serizy mena morona mena sy ny serizy mamy mamy. Mahafinaritra tokoa!
Amin'ny marika 10 3,89 Euro (litera 0,75) any Vienna
#16 Zava-pisotro angovo mangatsiaka Mad Bat
Ny rantsam-borona Energyrink dia vita amin'ny masomboly nipoitra voajanahary. Azo ampiasaina sy tsy misy asidra karbônina ary mampahatsiahy fofona sy tsiro amin'ny fifangaroana dite, paoma ary paiso. Tianay fa tsy matsiro toy ny zava-pisotro angovo hafa ary tena mamelombelona!
Ho an'ny umn to 1,59 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 34
#17 Omis paoma strudel
Apple strudel amin'ny fisotroana
"Omis apple strudel" dia zava-pisotro vaovao - vita any Aotrisy - ary mitana ny tsirony, izay ampanantenainy anarany. Namboarina avy amin'ny akora organika, ny famoronana Styrian dia mitarika hafanam-po any Amerika sahady!
At Billa (tsy amin'ny rehetra!) Ao amin'ny 1,49 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 28
#18 Hakuma Organic Matcha Tea Drink
Hafahafa hafahafa ary mahagaga be. Ny zava-pisotro dite Matcha avy any Aotrisy dia misy voajanahary ary manome toky ny fiantraikany amin'ny vatana miaraka amin'ny akora toy ny ginger sy baobab. Baobab dia misy fiantraikany antioxidant ary mampihena ny siram-ra. Siramamy tsy ampiana na asiana siramamy, satria ny mamy dia manome siramamy agave sy mango puree.
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 29
#19 Pejy voankazo masira paiso
Fivarotana ranom-boankazo (organika) toy izany!
Miaraka amin'ny jus-ny Apple & Peach Lutz dia mitondra tononkalo voankazo kely ao anaty tavoahangy. Ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana ny tsiro dia afenina ao amin'ny fanaraha-maso amim-pitandremana ireo voankazo feno masaka ary ny fambolena manokana sy malefaka. Voajanahary avokoa ny akora rehetra, tsy misy ahitra, maimaimpoana amin'ny hanitra sy siramamy ary mamy… ary tsy misy fahatoniana akory, misy ny fifaliana voankazo ao anaty enina mahafinaritra matsiro.
Azo alaina ao amin'ny fivarotana an-tserasera 1,79 Euro
nampian'i Helmut Melzer 12. Oktobra 2019, 12: 31
Previous article Ny ampitson'ny ampitso dia Halloween !! Ho an'ireo izay tsy tia mamy na masira ...
Lahatsoratra manaraka BrunoManser_TVS1_D_20sec_WebMST20191024 - miaraka amin'ny horonantsary
Bebe kokoa avy amin'ny: Sakafo organika
Andro tontolo iainana ankehitriny! Te hankalaza izany miaraka aminao izahay.
in asa, Vaovao momba ny ONG, USA, Videos
Fanentanana fampielezan'ny #RightsNow | Etazonia Amnesty
Ny Naturhotel Chesa Valisa no hotely organika voalohany any Vorarlberg, nanomboka ny taona 2007. Mpisava lalana ...
RepaNet - tambajotram-panamboarana sy fanamboarana ny tambajotram-pahefana 35 any Aotrisy i Aotrisy.
FAIRTRADE Aotrisy dia fikambanana tsy mitady tombontsoa, ​​ny 1993 fikambanana avy amin'ny sehatry ny ...
Ny ampitson'ny ampitso dia Halloween !! Ho an'ireo izay tsy tia mamy na masira ...
BrunoManser_TVS1_D_20sec_WebMST20191024 - miaraka amin'ny horonantsary